इमेज साप्ताहिक : 2016-12-11
भुकम्प पछि परिवारको साधन प्रयोगमा कमी
विदुर । तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटले जिल्लाको तथ्याङ्कीय झलक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना भएको पाँच वर्षको पछिको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा अध्यायन र तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
जस अनुसार नुवाकोट जिल्लामा चार जना तेश्रो लिङ्गी समेत रहेका छन् । मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको नाम र लिङ्गका आधारमा जिल्लामा जम्मा मतदाता १ लाख ८६ हजार रहेको छ । त्यसमा ९१ हजार महिला र ९५ हजार पुरुष रहेका छन् । जनसंख्या भने अध्यावधि गरिएको छैन । जनगणना २०६८ ले सार्वजनिक गरेकै झण्डै पौने तीन लाख जना नुवाकोटमा रहेका छन् ।
त्यस्तै नुवाकोट जिल्लामा १०६ वटा गैर सरकारी संस्थाहरु क्रियाशिल रहेको छ । पुर्न निर्माणका लागि १४, शिक्षामा १०, स्वास्थ्यमा १०, खेलकुद विकासमा ८, जनचेतना र वकालतमा ६, मानव विक्रि विरुद्धको अभियानमा ८, भौतिक पुर्वाधार विकासमा ११ वटा संस्थाले काम गरिरहेको छ ।
नयाँ तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कृषि र पशुपालमा १२, मानव अधिकार, द्धन्द्ध व्यवस्थापनमा ७, गरिवी निवारणमा १० र सीप विकासमा १० वटा संस्थाहरु क्रियाशिल रहेको छ । भुकम्प जानु भन्दा अगाडी नुवाकोट जिल्लामा यी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ६५ वटा संस्था मात्रै क्रियाशिल रहेको पाइएको थियो ।
जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय नुवाकोटको श्रोत उघ्रित गर्दै तथ्याङ्क कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नुवाकोट जिल्लामा भुकम्प पछि परिवार नियोजनाको साधन प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा कमी आएको छ । स्थायी परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेमा आर्थिक वर्र्ष २०७१÷७२ मा ३ सय ८ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा जम्मा १ सय २४ मात्रै रहेका छ । त्यस्तै अस्थायी साधन प्रयोग गर्नेहरुमा पनि आठ सयले कमी आएको छ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Tuesday, December 13, 2016 No comments:
नुवाकोट काठमाडौं सुरुङ्गको तयारी
विदुर । राजधानी काठमाडौं र रसुवाको नाका केरुङ जोड्ने सडक मार्ग अन्तर्गत टोखादेखि नुवाकोटको थानसिंग फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणमा लगानीका लागि सरकारले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी)मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न चीनको बेइजिङस्थित एआइआइबीमा प्रस्तावनापत्र पेस गरेको हो । असार पहिलो साता पेस गरिएको प्रस्ताव अनुसार एआइआइबीले लगानीको निर्णय गरेमा सुरुङमार्ग निर्माणको थप प्रक्रिया छिटै अघि बढ्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखा प्रमुख विष्णुओम बादेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत् प्रस्ताव पेस भएको छ र एआइआइबी लगानी गर्न तयार भए सरकारले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्ययन गरेर शिवपुरी डाँडा छेडेर टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंग फाँटसम्म पुग्ने सुरुङमार्ग निर्माणको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । भौतिक मन्त्रालयले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय मार्फत एआइआइबीमा पेस भएको छ । लगानी जुटाउन अहिले छलफल जारी रहेको समेत बताइएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमानित लागत आठ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार भएपछि मात्रै लागतको यकिन हुने भौतिक योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरुङको लम्बाइ ४ दशमलव ५ किलोमिटर भएमा चारदेखि पाँच अर्ब र ६ किलोमिटर भएमा आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । शिवपुरीको डाँडा छेडेर बन्ने टोखा–थानसिंग फाँटसम्मको सुरुङमार्ग घटीमा ४ दशमलव ५ र बढीमा ६ किलोमिटर सम्मको र चार लेनको हुनेछ ।
सुरुङमार्ग रसुवागढी नाकाबाट केरुङ जोड्ने गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ सडक खण्डमा जोडिने छ । जसको लम्वाई ४८ किलोमिटर रहेको छ । उक्त सडक निर्माण गर्न सडक विभागले ठेक्का सम्झौता समेत गरिसकेको छ । सडक विभागको वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले सुरुङमार्ग निर्माण भएमा काठमाडौंबाट उत्तरी नाका केरुङसम्मको दूरी छोटो हुने बताउनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणसँगै दूरी छोटो हुने र यसले केरुङ नाका मार्फत चीनसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
विदुर । भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि सरकारको तर्फबाट गाउँ गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरुले विभिन्न माग राख्दै पुनर्निर्माणको काम छाडेका छन् ।
आफ्नो माग पुरा गर्न सरकारलाई मंसिर मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिदै उनीहरुले पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन् । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म पनि माग पुरा नगरे पुस ५ गते सबैले सामूहिक राजिनामा दिने उनीहरु चेतावनी दिएका छन् ।
प्राविधिकहरूले उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा संघर्ष समिति र केन्द्रमा पनि समिति गठन गरेर आन्दोलित भएका हुन् । अहिले पुनर्निर्माणमा खटेका प्राविधिक मध्ये इन्जिनियरले अधिकृत, ओभरसियरले सुब्बा र सब ओभरसियरले खरिदार सरहको पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । इन्जिनियरहरुले सेवा सुविधा, जीवन बीमा, सुरक्षा, कार्यालय र स्पष्ट निर्देशिका हुनुपर्ने माग राखेका छन् । गाँउमा काम गर्न आवश्यक पुर्वाधार र वातावरण पनि नभएको प्राविधिकहरुको गुनासो छ ।
तीन करोड विनियोजन
विदुर । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ को बजेट विनियोजन भएको छ ।
२५ वटा योजना मध्ये १९ वटा योजनालई १०÷१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै भन्दा बढी एउटै योजनामा ४० लाख रुपैयाँ परेको छ । जसमा भाल्चे गोगाभञ्याङ्ग रुप्चेत सिङ्ला सेर्तुङ्ग बोराङ्ग जोड्ने सडक रहेको जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जनाएको छ ।
तीन करोड रुपैयाँको झण्डै ८५ प्रतिशत रकम सडकमा खर्चिनका लागि छुट्याइएको छ । अन्य योजनाहरुमा ब्लड बैंक, शिक्षण संस्थाको पुर्वाधार खडा, सिञ्चाई, मरनपाटी निर्माण रहेको छ । नुवाकोटको अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित रकम मध्ये क्षेत्र नम्वर १ ३ को बढी सन्तुलित देखिएको छ । क्षेत्र नं. १ र २ को ९७ प्रतिशत रकम सडक निर्माणका लागि मात्रै खर्च गरिने भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ मा रहेको विदुर नगरपालिकाको लागि विभिन्न आठ वटा योजनाका लागि ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाँकी रहेको २ करोड ६ लाख रुपैयाँ १३ वटा गाउँ विकास समितिमा विनियोजन भएको छ ।
जसमध्ये तुप्चे गाविसमा १०÷१० लाख रुपैयाँको दुई वटा योजना, खड्गभञ्याङ्गमा पनि १०÷१० लाख रुपैयाँको दुई वटा योजना रहेको छ । १०÷१० लाख रुपैयाँको दुई वटा योजना रहेका अन्य गाविसमा बुधसिंग पनि रहेको छ । नुवाकोट क्षेत्र नं. ३ को बाँकी रहेको अन्य गाविसहरुमा एक एक वटा योजना परेको छ । उक्त योजनाको बजेट कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ रहेको जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जनाएको छ ।
उत्कृष्ठ इकाई पुरस्कृत
बेत्रावती । छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड बेत्रावती शाखाले उत्कृष्ट इकाईहरुलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
नुवाकोट र रसुवामा छिमेक लघु वित्त विकास बैंक लिमिटेडले ७० वटा इकाई गठन गरेको छ । जस मध्ये पहिलो हुने तुप्चे–५ साहुगाउँ साधीखर्क, दोश्रो हुने रसुवा भोर्ले–५ आपचौर र तेश्रो हुने सोही वडाको माझगाउँ इकाइलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै दशौं स्थानसम्म रहेकाहरुलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छिमेक लघुवित्त विकास बैंक बेत्रावतीका शाखा प्रवन्धक मेघराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो हुनेलाई चार हजार, दोश्रोलाई तीन हजार, तेश्रोलाई दुई हजार नगद पुरस्कार वितरण गरिएको छ । त्यस्तै चौथो देखि छैटौसम्म हुने सबै समुहलाई एक÷एक हजार र सातौदेखि १० औं सम्मको इकाईलाई पाँच सय रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । त्यसका साथै इकईमा आवद्ध भएका महिलाहरुको छोरीलाई पढाई खर्च स्वरुप २४ सय रुपैयाँ समेत प्रदान गरिएको छ ।
छिमेक लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले १० देखि २९ जना सम्मको महिलाहरुको समुह गठन गर्ने गरेको छ । इकाईको नियमित कार्यहरुको तुलनाको आधारमा बैंकले उत्कृष्ठ १० वटा इकाई छनोट गर्दै आएको छ ।